Esemokwu dị n'etiti ịnweta na nkume: nkọwapụta na njirimara | Network Meteorology
Esemokwu dị n'etiti ịnweta na nkume
Enwere ọtụtụ ndị na-emegharị ha mana enwere nnukwu ọdịiche dị n'etiti ịnweta na nkume. Anyị nwere ike nyochaa n'ụzọ zuru ezu ụfọdụ iche iche dị ka size, agba na udidi na gba ọtọ anya na ndị ọzọ na chemical iche na-akwanyere ha mejupụtara. Nke a pụtara na ma mineral na okwute nwere ihe dị iche iche. Isi mmalite ya na ihe mejupụtara ya bụ maka ọdịiche dịgasị iche iche dị na njirimara nke mbara ala.
N’isiokwu a anyị ga-akọwa ihe ndịiche dị n’etiti ịnweta na okwute.
1 Gịnị bụ ịnweta
2 Nkọwa na ọkwa nke nkume
3 Esemokwu dị n'etiti ịnweta na nkume
Gịnị bụ ịnweta
Ihe mbụ anyị kwesịrị ịma bụ ọdịiche dị n’etiti nkọwa nke ịnweta na okwute. Mineral bụ ihe siri ike nke e kere eke n'ụzọ nkịtị yana nke anaghị arụ ọrụ. O nwere ihe ndi mejuputara na ihe omuma nke oma. Dabere n'ụdị ịnweta ọ ga-enwe usoro ihe mkpuchi ma ọ bụ ọzọ. Ihe owuwu a, nke bu ihe na-eme ka ịnweta ihe, dabere na mmalite ya na nhazi ya.
Mmalite nke ịnweta na-adabere na mmiri ọgwụ na anụ ahụ, kemịkalụ na njirimara thermodynamic nke usoro okike ya. Nke a pụtara na Guzobe nke ịnweta na omimi miri emi abụghị otu ihe na mbara ala. Maka mineral na nhazi ha, ihe omumu banyere ala na-eme na ala enweghị ihe jikọrọ ya, ebe ha na-eme na nkume. Shapesdị okwute na nhazi ha dị iche iche na-adabere na ihe omimi ala a hụrụ na ebe e guzobere.
Nhazi na nhazi nke mineral
Enwere ike ịhazi ihe ndị nwere ike ịdabere na mmiri ọgwụ ha, usoro dị n'ime ya, n'ime otu ndị a:
Ihe ndi ala.
Oxides na hydroxides.
Carbonates, nitrates na borates.
Sulfates na chromates.
Volframates na molybdates.
Phosphates, arsenates na vanadates.
Ebe ọ bụ na mineral ọ bụla nwere ọtụtụ kemịkal dị iche iche, ọ na-adịkarị n'ọtụtụ ụzọ:
Etiti: na mineral ndị a anyị na-achọta akụrụngwa n'ụzọ agbarụ kpamkpam. Ha bụ ihe owuwu ndị na-ekwekọghị na ụdị ọdịdị geometric akọwapụtara. Nke a na - eme ka ịnweta ịnweta ihe amorphous ma enweghi ike nyochaa ụdị geometric. Dịka ọmụmaatụ, otu n'ime mineral nke nwere ihe mejupụtara n'ụzọ rụrụ arụ bụ iko okike.
E nyere iwu: bụ mineral ndị ahụ ihe mejupụtara ya na-eme ka ọdịdị geometric kọwaa nke ọma. Ọ bụ ebe a ebe ndị agbata obi na ịnweta nwere ngwongwo kristal. Ngwurugwu kristal nwere ike ịbụ n'ọtụtụ ụzọ. Ọ bụrụ na enwere ike iji anya nkịtị nyochaa mineral, a ga-akpọ ya kristal. Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke mineral bụ kristal, ebe ọ bụ na a pụrụ iji anya nkịtị hụ ọdịdị ha dị ka kristal.
Ekwesiri ikwusi ike na mineral kwesiri inwe ihe mejuputara ya na nke a gha dabere na ihe ịnweta ya. Anyị nwere ike ịmara na graphite na diamond n'otu ihe mejupụtara. N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, ọ bụ otu ihe ahụ mejupụtara ha, ma ha nwere nhazi mkpụrụ ndụ dị iche. Nke a na - eme ka ha abụọ dị iche iche dị iche iche na ihu na nhazi. Na mgbakwunye, uru akụ na ụba nke otu na nke ọzọ dịkwa iche.
Nkọwa na ọkwa nke nkume
Ozugbo anyị matara ihe mineral bụ na otu esi kesaa ya dabere na usoro ha na ngwakọta ha, ugbu a, anyị ga-amata ihe ndịiche dị n'etiti ịnweta na nkume. N'adịghị ka mineral, nkume bụ nsonaazụ nke ihu igwe na ọdịdị ala, nke bụ ndị na-azaghachi ọdịdị ha, ogo ha, wdg. Akụkụ ndị a nke nkume bụ ngosipụta nke usoro ihe ọmụmụ ala kere ha. Ọ bụ ebe a ka ndị ọkà mmụta sayensị na-amụ ihe iji nweta ozi niile dị mkpa maka nghọta nke ụwa anyị na itinye okwute dị ka akụ na ụba na akụrụngwa.
Nkume dị iche iche, dabere na nhazi ha, dị iche na 3 nnukwu ìgwè: ihe na-adọrọ adọrọ, nke na-edozi ahụ na nke na-edozi ahụ. Typedị nkume ọ bụla nwere àgwà dị iche iche. Ka anyị lee ihe bụ njirimara nke ụdị nkume dị iche iche:
Nkume nzuzu: Ha bụ ndị kpụrụ mgbe magma jụrụ ma sie ike. Dị ka magma a si ajụ, kristal nke mineral dịgasị iche iche na-etolite ka ọ dị jụụ n'ime eriri ahụ ga-abụ usoro nwayọ nwayọ ma ọ bụrụ na ọ dị jụụ n'èzí ọ ga-abụ usoro ngwa ngwa. Igwe jụrụ nke magma ga-eme ka okwute nwee otu ụdị ma ọ bụ ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na magma jụrụ oyi n'ime ala ụwa, a ga-akpọ ha plutonic igneous nkume. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na magma jụrụ oyi n'èzí ụwa, ọ ga-abụ okwute na ugwu mgbawa ugwu nke na-adịkarị mma na kristal buru ibu.
Sedimentary nkume: nkume ndị a nwere usoro nhazi dị iche iche karịa ndị gara aga. Ha na-guzobere site na compaction ma ọ bụ ciment nke sedimenti n'ígwé. Sediment bụ foduru nke nkume ndị ewepụrụ n'ihi usoro ihu igwe ndị ọzọ. Ga n'ihu compaction ma ọ bụ simenti site na nrụgide na ike ndọda na-etolite nkume ndị a.
Metamorphic nkume: a na-esite n'okwute ndị ọzọ na-asọ oyi, nke na-edozi ahụ, ma ọ bụ ọbụna na-emepụta ihe ndị ọzọ. Weathering bụ usoro na-apụta n'anụ ahụ ma ọ bụ na nke kemịkalụ na nke nwere ike imezi ihe ndina ya ma gbanwee ya ka ọ bụrụ nkume ọhụrụ ọzọ. Mgbanwe mgbanwe anụ ahụ ma ọ bụ kemịkal a gbanwere site na mgbanwe okpomọkụ, nrụgide, mgbanwe kemịkal, wdg.
Ozugbo anyi matara nkowa nke abuo, anyi puru ima ihe di iche na etiti. Anyi aghaghi ima na esemokwu di iche na eziokwu bu na nkume a mejuputara ihe ndi ozo di iche iche dika nkpuru ma obu kristal na ihe kariri otu ịnweta. Okwute nwere ike ịkọ ọtụtụ mineral. Mgbe nkume nwere naanị otu ịnweta, a na-akpọ ya monomineral rock.
Ihe dị iche bụ na, ọ bụ ezie na mineral na-etolite n'ụzọ kwụsiri ike yana ọnụọgụ atọm na usoro kemịkal, a na-akpụzi okwute site na ha.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu ihe dị iche na etiti na okwute.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Esemokwu dị n'etiti ịnweta na nkume